बुधबार, ४ मङ्सिर, २०७६ Wednesday, 20 November, 2019
बुधबार, २९ असोज, २०७६
लियोनल मेस्सीले डेब्यु गरेको आजको दिनलाई स्पेनिस पत्रिका 'स्पोर्ट्स' ले सधैँ अक्टोबर १६ लाई 'मेस्सी डे' को रुपमा सम्झिरहने लेखेको छ।
काठमाडौं । अक्टोबर १६, २००४ । आजैको दिन । १७ वर्षिय ठिटो । ओलम्पिक स्टेडियम मोन्टजोइक। बार्सिलोना इस्पानियोल विरुद्ध भिड्दै । सातौं चरणको ला लिगा खेल । खेलको ८२ औं मिनेट । जर्सी नम्बर ३०। ठिक १५ वर्ष अगाडि बार्सिलोनाको लागि 'अफिसियल डेब्यु' गर्ने खेलाडि थिए लियोनल मेस्सी। त्यो दिनलाई बार्सिलोना र मेस्सीका समर्थकहरुले 'मेस्सी डे' पनि भन्ने गर्छन् ।
त्यसदिन यता, मेस्सीले बार्सिलोनामा जित्न केहि बाँकि रह्यो कि भनेर पछाडि फर्केर कहिल्यै हेर्नु परेन। उनले क्लबस्तरमा सबै जित्नुपर्ने उपाधी जिते, सबै खाले उपाधि । त्यहाँ उनले यति धेरै सफलता पाए कि उनलाई महान् खेलाडिहरु म्यारोडोना, पेले, डी स्टेफानो र क्रुएफ लगायतसँग सजिलै दाँजियो । अझ, उनी ती महान फुटबलरहरु मध्ये पनि महान् भएको बारम्बार सुनिने गरिन्छ । जुन उनको गोल, उपाधि, खेलस्तर र सफलताले पुष्टि समेत गरेको छ।
???? #Messi’s 6th #GoldenShoe Ceremony
⏰ From 1.00pm CEST
???? LIVE on https://t.co/A1WiJBXvhL & @FCBarcelona pic.twitter.com/VlU9tRTa6i
पन्ध्र वर्षको अवधिमा मेस्सीले ८२३ खेल खेल्दै ६७२ गोल गरे । जसमा ४१९ ला लिगा गोल, ११२ च्याम्पियन्स गोल गरे । उनले ६८ गोल भने रास्ट्रिय टोलीबाट गोल गरे । उनले बार्सिलोनाको लागि ६९२ खेल खेल्दै ६०४ गोल गरे । उनले २४४ गोलको लागि सहयोग गरे ।
उनले बार्सिलोनासँग १० ओटा ला लिगा, ८ स्पेनिस सुपरकप, ६ कोपा डेल रे, ४ च्याम्पियन्स लिग, ३ युइएफए सुपरकप, ३ क्लब विश्वकप जिते । व्यक्तिगत रुपमा बार्सिलोनाको टिमबाट डेब्यु गरेपछि ५ बालोन डी' ओर, ६ ओटा गोल्डेन बुट, र १ फिफा द वेस्ट प्लेयर समेत गरेर उनले समग्रमा ३६ उपाधि जिते।
How would you describe #Messi?
लियोनल मेस्सीले डेब्यु गरेको आजको दिनलाई स्पेनिस पत्रिका 'स्पोर्ट्स' ले सधैँ अक्टोबर १६ लाई 'मेस्सी डे' को रुपमा सम्झिरहने लेखेको छ। आजै राति मेस्सीले आफ्नो छैटौं गोल्डेन बुट समेत लिने छन् । जुन युरोपभरिको सबैभन्दा बढि गोल गर्ने खेलाडीलाई दिइन्छ।
भूटानमा नेपाल र कुवेत भिड्दै
गोदावरीमा राष्ट्रव्यापी क्योकुशिन कराते प्रतियोगिता हुँदै
पीएसएलको 'सिल्भर क्याटगोरी' ड्राफ्टमा पूर्वकप्तान पारस र सोमपालसहित ७ खेलाडी
सोमबार, २ मङ्सिर, २०७६
पेलेले भने - मेस्सी सबैभन्दा पूर्ण खेलाडी, अग्रपङ्तिमा मेरो 'पर्फेक्ट पार्टनर'
महिला भलिबल टोलीलाई ऐतिहासिक पहिलो स्वर्णपदक
बंगलादेशका राष्ट्रपतिको फेवातालमा जलविहार [फोटोफिचर]
शंकर र अञ्जुको रोमान्टिक स्वरमा ‘तिमीलाई कति माया गर्छु’ [भिडियो]